सीआईटीले ३.५ लाख बढी कित्ता सेयर फागुन २१ बाट लिलामीमा राख्ने, क–कसले किन्न पाउँछन् ?
काठमाण्डौ । नागरिक लगानी कोष (सीआईटी) ले अवितरित हकप्रद सेयर फागुन २१ गतेबाट लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। कोषले गत पुस २८ गतेदेखि माघ १९ गतेसम्म हकप्रद निष्कासन गरेको छ। जसमा आवेदन नपरेको कुल ३ लाख ५४ हजार १५०.०५ कित्ता सेयर कोषले लिलामीमार्फत बेच्ने भएको हो। लिलामीमा राखिने सेयरमा इच्छुक व्यक्ति, कम्पनी तथा संघसंस्थाहरुले आवेदन...
लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन र एक्यानबीच समझदारी
काठमाण्डौ । र्डबुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसन (एलबीईएफ) र द एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल (एक्यान) बीच एक समारोहमा शैक्षिक सहकार्यका लागि समझदारी भएको छ। शुक्रबार एलबीईएफका अध्यक्ष पंकज जालान र एक्यानका अध्यक्ष आनन्द शर्माले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। समझदारीअनुसार लर्डबुद्ध एजुकेसन फाउन्डेसनअन्तर्गतको कलेज फर...
एनसीसी बैंकले २५ लाख कित्ता फागुन ११ बाट लिलामीमा राख्ने, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक लिमिटेडले २५ लाख कित्ता संस्थापक सेयर लिलामीमार्फत बेच्ने भएको छ। बैंकले आउँदो फागुन ११ गतेबाट लिलामीमार्फत संस्थापक समूहको २५ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो। यो लिलामीमा सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीलगायत अन्य इच्छुक व्यक्ति, फर्म कम्पी तथा संगठित संस्थाहरुले बोलपत्र...
एनआईसी एसिया बैंकले राख्यो झन्डै साढे ४ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाण्डौ । तीन कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वका झन्डै साढे ४ लाख कित्ता संस्थापक सेयर एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले आज मंगलबारबाट लिलामीमा राखेको छ। एनआईसी एसिया बैंकले नागरिक लगानी कोष, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा रहेका आफ्नो स्वामित्वका ४ लाख ४८ हजार ६७० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो।...
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले ६ कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक सेयर आज बिहीबारदेखि लिलामीमा राखेको छ। बैंकले नागरिक लगानी कोषसहित ३ लघुवित्त र दुई जीवन बीमा कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल १५ लाख ७९ हजार २७९ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको छ। बैंकले आरएमडीसी लघुवित्तमा रहेको ४ लाख ३६ हजार ३६१ कित्ता, माहुली...
आजबाट एनआईसी एसियाले राख्यो सवा ६ लाख कित्ता सेयर लिलामीमा, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले अन्य चार कम्पनीमा रहेका आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक समूहको करिब सवा ६ लाख कित्ता सेयर आज सोमबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले ती कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ६ लाख २३ हजार ८८० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएका सेयरमा नागरिक लगानी कोषको २ लाख २ हजार ५६० कित्ता, नेसनल लाइफ...
लिलामीमा राखिएका पाँच कम्पनीका सेयर उठाउने आज अन्तिम दिन
काठमाण्डौ । पाँच कम्पनीका लिलामी सेयरमा बोलपत्र पेस गर्ने आज शुक्रबार अन्तिम दिन रहेको छ। एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले गत आइतबारबाट लिलामीमा चारवटा अन्य कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक समूहका कुल ६ लाख २७ हजार २०० कित्ता सेयरमा आज बैंकिङ समयभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। लिलामीमा राखिएका सेयरमा नागरिक लगानी कोषको २ लाख २...
तीन कम्पनीमा रहेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर आजबाट लिलामीमा
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपेन्ट बैंक लिमिटेडले तीन कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक समूहको सेयर आज आइतबारबाटलिलामीमा राखेको छ। बैंकले आरएमडीसी लघुवित्त, ग्रामी विकास लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल १ लाख ४५ हजार ३१९ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। जसमा आरएमडीसीको २२ हजार २७० कित्ता,...
एनआईसी एसियाले राख्यो ६.२७ लाख कित्ता बढी सेयर लिलामीमा, क–कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडले चारवटा अन्य कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापक समूहको सेयर आज आइतबारबाट लिलामीमा राखेको छ। बैंकले ती कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको ६ लाख २७ हजार २०० कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामीमा राखिएका सेयरमा नागरिक लगानी कोषको २ लाख २ हजार ५६० कित्ता, नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १ लाख ३...
मल्टीपर्पस फिनान्सको १७ लाख कित्ता सेयर आजबाट लिलामीमा उठाउन पाइने
काठमाण्डौ । मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनी लिमिटेड (वित्तीय संस्था) ले संस्थापक समूहको साढे १७ लाख बढी कित्ता सेयर आज शुक्रबारबाट लिलामीमार्फत बिक्री खुलाएको छ। संस्थाले गत वर्ष असार २३ गतेदेखि भदौ ९ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएको १७ लाख ५९ हजार ६२१ कित्ता सेयर लिलामीमा राखेको हो। लिलामी सेयरमा कम्पनीका संस्थापक...
तीन कम्पनीमा रहेको एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर लिलामीमा राखिने, कसले किन्न पाउने ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपेन्ट बैंक लिमिटेडले तीन कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको संस्थापम समूहको सेयर लिलामीमा राख्ने भएको छ। बैंकले आरएमडीसी लघुवित्त, ग्रामी विकास लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको कुल १ लाख ४५ हजार ३१९ कित्ता सेयर यही पुस १९ गतेबाट लिलामीमा राख्ने भएको छ। जसमा आरएमडीसीको २२ हजार...